Tiger Zinda Hai oo weli guuxayo madaama uu guda galay todobaadkiisa 7-aad asigoo ganacsi wacan sameenayo! – Filimside.net
Tiger Zinda Hai oo weli guuxayo madaama uu guda galay todobaadkiisa 7-aad asigoo ganacsi wacan sameenayo!
Taariikhda: February 3, 2018
Mega Star Salman Khan filimkiisa Tiger Zinda Hai weli waxbaa u harsan madaama uu guda galay todobaadkiisa todobaad asigoo si fiican ku bilaawday.
Taariikhaan casriga lama arag filim Action ah oo sidaan u gadmaayo marka Gada Ek Prem Ktaha meel la iska dhigo waana lala yaaban yahay in Tiger Zinda Hai weli tiyaatarada ka dagi weesan yahay una gadmaayo sida filim fariin arimaha bulshada xambaarsan oo kale.
Sida shabakada BOI soo daabacday filimka Tiger Zinda Hai Jimcadiisa todobaad wuxuu keenay 15 Lakh (Trade Figure) wuxuuna sameeyay 20% hoos u dhac ah marka lala bar bar dhigo Khamiistii ganacsiga uu sameeyay waana astaan muujineyso in filimkaan weli uu heesto daawadayaal ku filan.
Tiger Zinda Hai wuxuu ku socdaa ganacsigiisa guud inuu ku istaago 339 Crore waayo filimka Padmaavat ayaa laga qaaday xayiraadii ka saarneyd gobolada Gujarat, Rajasthan iyo MP taasi oo Tiger u diidi doonto inuu 340 Crore gaaro.
Fadlan hoos kaga bogo TZH ganacsiga uu sameeyay ilaa haatan gudaha Hindiya lacagaha nadiifka ah canshuurta kadib:
Jimco todobaad – 15 Lakh (Qiyaas)
Wadarta Guud – 338.32 Crore (Trade Figure) (Qiyaas)
Waxaa Aqrisay 420